News Collection: अध्यक्ष बाँचुञ्जेल डरलाग्दो व्यक्ति बन्ने शंका छः भट्टराई
पार्टीमा अध्यक्षमात्र 'हेडक्वार्टर' नभएको जिकीर गर्दै नेतृत्वपंक्ति नै हेडक्वार्टर भएको र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीबाट पार्टी चल्नुपर्नेमा जोड पनि दिएका छन्।
'बाँचुञ्जेल स्टालिनका सत प्रतिशत विचार ठीक मान्ने र मरेपछि उनकै सहयोगी ख्रुश्चेवले स्टालिनलाई सबै बेठीक भएको आरोप लगाए,' भट्टराईले सोमबार सवा दुई घन्टा लामो आफ्नो प्रस्तुतिमा भने, 'अध्यक्षको शैलीले उहाँ बाँचुञ्जेल डरलाग्दो व्यक्ति बन्नुहुन्छ कि भन्ने हाम्रो आंशका हो, त्यो हुनुहुँदैन। त्यसैले पार्टीभित्र व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।'
बैठकमा सहभागी स्रोतका अनुसार सोमबार बिहान आफ्नो दस्तावेजबारे सवा दुई घण्टा लामो मन्तब्य दिएका उपाध्यक्ष भट्टराईले ढिलोचाँडो सबै नेता आफ्नो लाइनमा सहमत भएरै छाड्ने दाबी गरे।
'एउटै व्यक्ति शक्ति र सत्तामा हुँदा पार्टीमा समस्या हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि त्यही भएको हो। हामीमा ज्युँदा हुँदासम्म केही नभन्ने मरेपछि प्रशंसा गर्ने प्रवृत्ति छ। अध्यक्षमा पनि त्यही देखियो', भट्टराईले भने- 'उहाँ व्यक्तिवादी हुनुभयो।'
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पीरामिड जस्तो हुनुपर्ने तर, अहिले पार्टी नेतृत्व धरहरा जस्तो भएको उनले बताए। 'धरहरा एकै पटक ढल्छ', दाहाललाई इंगित गर्दै उनले भने।
'डा बाबुराम भट्टराईले उठाएको विचार जहिले पनि सही छ, त्यो नेतृत्वले पछि बुझ्दै गयो', उनले भने, 'जसरी चुनबाङमा बुझियो, यो कुरा इतिहासले पूष्टि गर्दै आएको छ।'
अध्यक्षले आफ्नो दस्तावेजमा 'बाबुरामसँग संघर्ष प्रधान, एकता कहिलेकाही' राखेको शब्दप्रति भट्टराईले आपत्ति जनाए। 'बाबुरामसँग प्रचण्डको आरोप ठीक कि बेठीक? २० वर्षदेखि हामीबीच संघर्ष, एकता र रुपान्तरण सँगसँगै हुँदै आएको छ। यसबारे अध्यक्षले प्रष्ट पार्नुपर्छ।'
आफूलाई लगाएको भारतपरस्तको आरोप समयक्रममा गलत सावित भएको पनि उनले जनाए। 'अझै पनि मलाई पार्टीभित्रैबाट भारतसँग नरम भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्,' उनले भने, 'हाम्रो सिंगो पार्टीले म भारतसँग कहाँनेर झुकेँ, त्यो पत्ता लगाओस्, म पार्टीको जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार छु।'
उनले भारतलाई चिढ्याएर होइन, उसलाई न्युट्रलाइज गरेर जानुपर्ने तर्क दिए। 'अहिले सीधै भारतलाई चिढ्यायो भने उसले यहाँ हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहन्छ, विभिन्न परिस्थिति हेरेर भारतलाई न्युट्रलाइज गर्दै विद्रोहको योजना बनाउनुपर्छ, ताकि भारतले हस्तक्षेप गरेको बेला राष्ट्संघले सघाओस्। त्यस्तो अवस्थामा मात्र विद्रोहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ। होइन भने हामी पेरुजस्तै हुन्छौं, सत्तालाई टिकाउन सक्ने छैनौं।'
भारतको विरोध नगर्ने कम्युनिष्ट नेपाली कम्युनिष्ट हुन नसक्ने जिकीर गर्दै उनले सुगौलीसन्धीपछि नेपालमा अर्ध-औपनिवेशिक, अर्ध-सामन्तवाद हाबी रहेको र त्यसको नेतृत्व भारतले गरिरहेको औंल्याउँदै भने, 'त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्छ। मैले निरन्तर पार्टीमा यस्तो धारणा राख्दै आएको छु, अनि म कसरी भएँ भारतपरस्त?'
भट्टराईले ३५ वर्षको पछिल्लो अवधिमा क्रान्ति नभएको उदाहरण दिँदै भने, 'हामीले पेरुको पाठ सिक्दै चुुनवाङ बैठक गरेका हौ। चुनबाङ बैठकले जनयुद्ध र जनविदोहको संश्लेषित विचार ल्यायो, जुन पाटीको मौलिक लाइन हो।'
गोंगबु डिनरबारे प्रष्टिकरण दिनेक्रममा 'मार्क्सवादी पार्टीको नीति निर्माण गर्ने कुरा, संगठनात्मक संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे त्यो डिनरमा छलफल गरेको' उल्लेख गर्दै उनले भने, '२० वर्षको अन्तरालमा म उहाँ (वैद्य) सँग कहिलै छुट्टै बसेको थिइन, नेतृत्वको सामूहिकता र विचार संघर्षको विधि निर्माणको विषयमा छलफल भएको हो, यसबाट अध्यक्ष व्यक्तिवादी हुँदै जानु भएको हो भन्ने आंशका हुन्छ। अध्यक्षले दुश्मनका मात्र होइन साथीहरूको घेराबन्दीमा परेँ भन्नु ठीक थियो त? यसबारे उहाँले जवाफ दिनुपर्छ।'
भट्टराईले वैद्यको दस्तावेज अनुसार मार्क्सवादको एउटै परिभाषा नहुने जिकिर गरे। 'पहिले सूर्यको किरण सीधा आउँछ भन्ने थियो, तर क्वाण्टम सिद्धान्त आएपछि त्यो बदलियो। प्रकाश छिन्नभिन्न र सीधा तरिकाले पनि आउँछ भन्ने सावित भयो', उनले भने, 'अहिलेको मार्क्सवाद पनि त्यही हो। त्यसलाई अहिलेको अवस्थामा नयाँ परिभाषा गरिनुपर्छ।'
उनले आफ्नो पनि विद्रोहकै लाइन भएको दाबी गरे। 'अब ६ महिनाको तत्कालिन कार्ययोजना बनाउनुपर्छ', उनको जिकिर थियो, 'त्यसका लागि सडक र सदनका मोर्चालाई तताउँदै विद्रोहको आधार तयार पार्नुपर्छ।'
सधैं खस्रो मन्तव्यमात्रै दिने भट्टराईले बैठकमा प्रेमध्वज प्रधानको लोकप्रिय गीत 'पालुङटारको गोरूले सल्यानटारको बीऊ खायो'लाई रिमिक्स शैलीमा गाएका थिए,
पालुङटारको विचारले वालुवाटारको निद खायो
माओवादी एक जुट हुँदा संसारै जिल खायो।
त्यही गीतबाट भट्टराईले मन्तव्य सक्दा हलभरि ताली र हाँसोको गड्गडाहट चलेको थियो।